कैलाशको कुटी: थारु सांस्कृतिक संग्रहालय
Posted by कैलाश at 3:04 PM
साह्रै रमाईलो भ्रमणमा जानु भएको रहेछ र पो यतिका दिन बेपत्ता हुनुभएको रहेछ । मैले यसको बारेमा यहिँ आएपछि सुनेको थिएँ नेपालमा हुन्जेल त थाहै थिएन , नेपाल आउँदा म पनि घुम्न जाउँला भन्ने सोचेको छु । अनि त्यो यौटा तस्विरमा नाम राख्नलाई गाह्रो भएको हो कि हामीलाई त्यो के हो भनेर कत्तिको थाहा रहेछ भनेर जाँच गर्नु भएको हो ? नत्र भने त्यो तस्विरलाई थारुहरुको ढोल ढ्याङ्रो लेखेको भए भै हाल्थ्यो नि ?
म पनि केहि दिन यता कुटिमा पस्दे फर्कदैं गर्दै थिएँ, तपाई घर तीर जानु भयो होला भनेर ।
अन्तिम तस्विर चाहि ढ्याङ्रो नै होला, जुन कहिले काहि झाक्रिले पनि प्रयोग गर्छन क्यार ।
ढ्याङ्ग्रो नै हो जस्तो छ है......
शब्दले बोलेर ब्यक्त गर्द छ भने -तस्वीर ले आफै ब्यक्त गर्दो रहेछ- त्यसैले त भनिनछ नि ! तस्वीर आफै बोल्छ।
त्यस्तै छ तपाइको यो टासों पनी । राम्रो लाग्यो यो पनी तर कैलाश जी हिजो आज तपाइले अलिक पहिलो को तुलना मा अलिक कम टाइम दिनु भएजस्तो लागेको छ - ब्लोगिंग मा । मिठो खुराक को प्रतीक्षा म सधै पर्खिराहेको हुन्छु म ।
कैजाश जि सारै राम्रो लेख र तस्बिरहरु ल्याउनु भएछ।खुसि लाग्यो आफ्नो रितिपरम्परालाई जोगाईरख्नको लागि यस्तो सग्रलयहरुको उचितब्यबस्थाहरु मिलाउनु पर्ने हो।खुसि लाग्यो आफ्नो नभयनि थारुजातिको हेरेर।कम्सेकम आफ्नो पहिचान त राखेको छ।उनिहरुको,,,,
कुटीमा छिर्ने समय दिने र कमेन्ट गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद।
क्याप्सन बिनाको तस्बीर चाहि ढ्याङ्ग्रो नै हो। साथै मयुर तथा चराका प्वाख र मादल पनि देखिन्छ। खासगरी यसले थारु जातीको सांस्कृतिक पक्षलाई देखाएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी, नाचगान, चाडपर्व तथा विशेष अवसरमा यिनीहरुको प्रयोग गरिने गरिन्छ। यसभन्दा बढी चाहि नलेखु होला। किनकी माथि अर्को पोष्ट पनि आइसकेको छ अनि पछिलाई पनि कुराकानी साँचेर राख्नैपर्यो नि हैन र?
खोइ यो तपाईंको ब्लग का खुराकहरु अरु अन्य पाठक मित्रहरुले तेती हेरेजस्तो लगेन है प्रचार प्रसारको कमिले हो कि ? सबै ब्लगिङ साथीहरु मात्र छन त कमेन्टर मा त ...................